Nika isithsaba seThubhu yesinyithi, i-iron Wood Deck Screw, iScrack Driving Screw kwiZidingo zakho
Inkcazo:Isikali seThubhu yensimbi,I-alloy iron Set Screw,I-iron Wood Deck Screw,Isimbi ye-Self Drilling Screw,,
Home > Imveliso > Izikhonkwane ezenziwe ngokwezifiso > Izikhonkwane zensimbi
Iintlobo zeMveliso ze- Izikhonkwane zensimbi , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Isikali seThubhu yensimbi , I-alloy iron Set Screw ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-6061/7075 i-aluminium iqhosha lekhanda isikulufu Intshayelelo yeMveliso Isikali seAluminiyam ngokubanzi sithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano,...
Ngamaxabiso akhuphisanayo amaqhosha entloko Ukutshintshwa kwe-Screws yensimbi kunamandla ngakumbi. Kwi- Screws zeSinyithi , iimfuno zesayizi womtya wamalungu obudoda anokusetyenziswa. Kuyabonakala ukuba iiScrrews zeSinyithi zisetyenziswa kuluhlu...
ifenitshala yezixhobo ikharbhon yentsimbi iqhosha iqhosha I-Screws zizinto ezingabalulekanga kwimizi mveliso kubomi bemihla ngemihla, ezinje ngeekhamera, iglasi yamehlo, iiwotshi, zombane njalo njalo. Izitora zethu eziqhelekileyo zokungena...
Ifektri yexabiso eliphakamileyo lentsimbi yoqobo lokuHomba ngeScrows I-Screws zizinto ezingabalulekanga kwimizi mveliso kubomi bemihla ngemihla, ezinje ngeekhamera, iglasi yamehlo, iiwotshi, zombane njalo njalo. Izitora zethu eziqhelekileyo...
I-Button entloko yentsontelo yesikre Kwi- Screws zeSinyithi , iimfuno zesayizi womtya wamalungu obudoda anokusetyenziswa. Uyilo luyinoveli, eyenza ukubonakala kweScrews zeSimbi kutshintshe kakhulu. Izikere zahlula-hlulwe zangqukuva, intloko yeSocket...
I-M3x6mm i-Banda yeNtloko yeBhloko yeNtloko I-Screws zizinto ezingabalulekanga kwimizi mveliso kubomi bemihla ngemihla, ezinje ngeekhamera, iglasi yamehlo, iiwotshi, zombane njalo njalo. Izikali zethu eziqhelekileyo zesitokhwe zibandakanya i-...
Umgangatho ophezulu weeNtsimbi zeNtloko zeScrews I-Screws zizinto ezingabalulekanga kwimizi mveliso kubomi bemihla ngemihla, ezinje ngeekhamera, iglasi yamehlo, iiwotshi, zombane njalo njalo. Izikali zethu eziqhelekileyo zesitokhwe zibandakanya i-...
KwiChina Izikhonkwane zensimbi Abaxhasi
I-screws zethu zensimbi nazo zomelele kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kumzi-mveliso kunye ne-drone njl njl. Umbala wazo awunemibala njengezikali ze-aluminium kananjalo. Sivame ukubonelela ngezicwecwe ezimnyama, zesilivere, kunye ne-Zinc-plated color screws. Ubungakanani obahlukeneyo kunye neentlobo zensimbi zesikere zinokuhanjiswa. I-screw ye-Philip pan, i-screws zentloko, iqhosha le-socket cap, i-countersunk screws kunye nokunye okunjalo ziintlobo zethu ezithandwayo. Iindawo ezenziwe ngentsimbi ze-CNC zenziwa nazo. Ukuba ufuna inkonzo yokupakisha okhethekileyo kubandakanya iibhokisi ezikhethekileyo zephakheji, kukulungele nathi. Nawuphi na umbuzo okanye imfuno, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Isikali seThubhu yensimbi I-alloy iron Set Screw I-iron Wood Deck Screw Isimbi ye-Self Drilling Screw Isikali esisezantsi sensimbi